Muqdisho: Holac iyo qiiq is qabsaday Siinaay Ilaa Xararyaalle kadib markii gaari AMISOM jiiray wiil yar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Debadbaxyo rabshado wata ayaa maanta sideedii saac ee duhurnimo ilaa haatan oo la gaaray xilliga maqribka waqtiga Muqdisho ka socda xaafado ka mid ah degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho.
Debadbaxyadan ayaa bilwoday kadib markii sida dadka deegaanku sheegeen gaari ka mid ah Kolonyo ciidamada AMISOM uu agagaarka Isgoyska Faloorensa ku jiiray cunug yar, halkaasna kaga dhaqaaqay.
Dadka deegaanka oo careysan ayaa xiray wadada Laamiga ee Wadnaha laga bilaabo Isgoyska Siinaayo ilaa agagaarka Geed Jaceyl.
Sidoo kale, dadka ayaa xiray wadada aada madaxtooyada laga soo bilaabo meel ku dhow 15 May ilaa saldhiga booliska degmada Wardhiigley.
Dadka careysan ayaa meelaha qaar ku guabaya taayaro waxaana holac iyo qiiq hawada is qabasadeen Isgoyska Siinaay iyo meel wax yar dhanka Bakaaraka ka xigta Isgoyska Falooreensa.
Gaadiidkii mari jiray wadada Wadnaha ayaan tegi kari Isgoyska Siinaay ilaa Suuqa Xararyaale, waxeyna marayaan xaafado laamiga ka baxsan.
Dibad baxayaasha careesan ee kasoo horjeeday falka Ciidamada AMISOM ayaa gaadiidka tuurayay dhagxaan, waxaana ciidamada halkaas ku sugan mararka qaar ko u ridayaan rasaas si dadka isga kala ceyriyaan.
Ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada AMISOM Muqdisho ku jiraan caruur iyo dad waaweyn, waxaana horay sidaan oo kale Muqdisho uga dhacay debadbaxyo looga soo horjeedo falalka ay gaadiidkooda dadka ku dilaan, kadibna isaga tagaan.